२३ बर्षे चियावाली जस्ले चिया बेचेरै कमाउँछिन महिनाकै २ लाख - टि. एल. एन पोस्ट
Home अनौठो कुरा २३ बर्षे चियावाली जस्ले चिया बेचेरै कमाउँछिन महिनाकै २ लाख
२३ बर्षे चियावाली जस्ले चिया बेचेरै कमाउँछिन महिनाकै २ लाख
उदयपुरकी २३ बर्षकी सरिता केसी काठमाडौंको असनमा बिहान र बेलुका चिया बेच्छिन्, दिउँसो कलेज पढ्छिन् । उनको कुनै पसल छैन, थर्मसमा दुध र कालो चिया हालेर उनी कोठाबाट बेच्न निस्किन्छिन् ।
उनले यसरी चिया बेच्न थालेको १ बर्ष भयो । त्रिचन्द्र कलेमा पोलिटिकल साईन्समा व्याचलर गरिरहेकी सरिता चिया बेचेरै महिनाको साढे २ लाख हाराहारी कमाउँछिन् र १ लाख जोगाउँछिन् । आफ्नो भाई पढाउन र आफु पढ्न उनी राजधानीमा मेहेनत गरिरहेकी छिन् ।
काम सानो ठुलो हुदैन, मेहेनत गर्न लजाउन हुँदैन भन्ने बिचार बोकेकी सरिता धेरै युवाहरुका लागि प्रेरणा बनेकी छिन् । असन र त्यस वरीपरी उनलाई धेरैले ‘सुन्दरी चियावाली’ भनेर चिन्दछन् । चिया पिउनेहरुले उनको रुपमा धेरै प्रशँसा गर्दछन् । बृद्धबृद्धाले त उनलाई आफ्नो घरको बुहारी बन न भन्ने प्रस्ताव पनि राख्ने गरेको बताईन् ।
४ बर्ष अगाडि काठमाडौं आएकी सरिता केहि बर्ष परिवारकै खर्चमा पढिन् । बिस्तारै उनको परिवारलाई उनी र उनको भाईलाई पढाउन गाहे हुदै गएको सरिताले देखिन् । कृषक बाबु आमाको टाउकोबाट भाई र आफ्नो पढाईको बोझ हटाउन उनी चिया बेच्न थालिन् ।
त्यसअघि उनले असन घुम्दै जाँदा अरु चिया बेच्नेहरुलाई देखेकी थिइन् । बिदेश जानलाई बिदेशी भाषा कक्षा पनि लिईरहेकी सरिताले भाषा कक्षा छोडिन् र चिया बेच्न थालिन् । उनको चियालाई धेरैले मिठो मानेर खान्छन् । दिनमै ४०० कप चिया बेच्ने उनले सुरुको दिन भने ४ सय रुपैंया कमाएकी थिईन् ।
चिया बेच्ने क्रममा कतिले दुध चियालाई दुई अर्थ लगाएर आफुलाई नराम्रो हिसाबले जिस्काउने गरेको पनि उनले सुनाईन् ।
Previous articleविवाहको भोलिपल्ट श्रीमतीलाई श्रृंगार बिना देख्दा श्रीमान् चकित, डिभोर्सको माग
Next articleअब देखि पाँच सयको नोट यस्तो हुने, बैंकले पाँच सयको नोटमा थप्यो यस्ता नयाँ विशेषता
कुन होला संसारकै सबैभन्दा धेरै हेरिने युट्युब भिडियो, कति पायो भ्युज ? (भिडिओ सहित)
मन्त्री छान्न माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक बस्दै
तेह्रथुम पावरको आईपीओ आज बाँडफाँड हुँदै, यसरी हेर्नुहोस् रिजल्ट
रवि लामिछानेले नयाँ टेलिभिजन च्यानल खोल्ने